आज मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना कम !
काठमाडौँ । सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिरहेका थिएनन् । गठबन्धनबीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रीपरिषद्को विस्तार हुन सकिरहेको थिएन ।
अब भने सरकार विस्तार हुने भएको छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै सरकार विस्तार गर्ने बाटो खुलेको हो ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताइएको थियो । तर, सरकारमा सहभागी हुने सबै दलले मन्त्रीहरुको सुची टुंगो नलगाएपछि सरकार विस्तारमा थप केही दिन विलम्ब हुने देखिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका दुई दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्रीको सूची अझै बुझाएका छैनन् ।
कांग्रेसको भागमा प्रधानमन्त्रीसहित ७ जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहेको छ । माओवादी केन्द्रले ७ मन्त्री र नेकपा एसले ६ मन्त्री पाएको छ भने जसपाले ६ मन्त्री पाउने सहमति भएको छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसबाट मन्त्री बन्ने सुचीमा डा. मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडु र उमाकान्त चौधरी रहेका छन् ।
नेकपा एसतर्फबाट मन्त्री बन्नेमा विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, प्रेम आले, रामकुमार झाँक्री र जीवनराम श्रेष्ठको नाम रहेको छ । सिफारिस भएको छ ।